Soo dejisan Microsoft Security Essentials 4.9.218 – Vessoft
WindowsAmnigaAntivirusesMicrosoft Security Essentials
Bogga rasmiga ah: Microsoft Security Essentials
Microsoft Security Essentials – software caan ah oo ka tirsan shirkadda Microsoft si ay u ilaaliyaan nidaamka ka fayrusyada, spyware, kolkaasaa dirxi galay, oo hanjabaad kale furin. Microsoft Security Essentials ayaaba iskaanka nidaamka iyo la socodsiinayaa user ku saabsan isbedelada ka shakiyaan in aad kombuutarka ama isku day in rakibi spyware ah. Software waxuu si uu u hubiyo qalab la qaadi karo oo kala duwan oo sidayaal xogta furin. Microsoft Security Essentials kale oo ku jira qalab kaas oo u saamaxaya in ay hubiso ka versions ugu dambeeyey ka mid ah fayrasyada iyo spyware imtixaanka loo qorsheeyey ka hor.
Protection ka noocyada kala duwan ee hanjabaado
Skaanka ee qalabka la qaadi karo
Soo dejisan Microsoft Security Essentials
Faallo ku saabsan Microsoft Security Essentials
Microsoft Security Essentials Xirfadaha la xiriira